Harmonic mifehy tsaina Capacitor
Manan-tsaina Multifunction Meter
Power Online Quality Analyzer
Rail-Type tsaina Angovo Meter
PD354 nitondra Meter
Tongasoa eto amin'ny hanontany vidiny.
Raha toa ka misy liana tamin'ny YIDEK na ny vokatra, masìna ianao, aza misalasala mifandray aminay. YIDEK dia hanatitra ny kilasy voalohany-toetra, ny teknolojia sy ny asa fanompoana ho anao avy voalohany ka hatramin'ny farany.
YIDEK momba tsara toy ny fiainantsika. Izahay mifehy tanteraka ny toetra isaky ny dingana ny famokarana.
YIDEK tanteraka manatanteraka ny ISO9001 fitantanana tsara rafitra mba hanatsarana tehina 'fanentanana ny kalitao, ny avo antoka azo itokisana ny vokatra. Efa nahazo taratasy fanamarinana ny taona feno, CQC sy ny CCC.
Professional mpanamboatra ny hery reactive onitra sy ny kalitaon'ny vokatra herinaratra ny hery mihoatra ny 15 taona. Ny orinasa dia hita ao Wenzhou High-Tech National Industrial Zone Fampandrosoana sy ny R & D Center no misy ao Hangzhou.
YIDEK | Power Quality Vahaolana for Kanger ...
Ahoana no hanatsarana ny fahefana lafin-javatra?